Waxaa dhici karta in tiro ka mid ah sababaha aad u baahan tahay Best Free Cell Phone Spy App ka bilowda la socotid kids aad ilaa socodka hawlaha shaqaalaha. Iyadoo horukaca ee casri ah ee technology, waxaa suuragal ah in lala socdo meesha ay GPS, rikoor SMS iyo email farriimo, files helaan iyo macluumaadka xiriirka iyo ka badan, adigoo isticmaalaya statistics ah iyo la socodka nidaamka sida exactspy-Best Free Cell Phone Spy App.
Waxaa jira dhowr siyaabood oo kala duwan si ay u fuliyaan exactspy-Best Free Cell Phone Spy App by software ay khuseyso ama haddii kale adigoo isticmaalaya qalabka. Waxaa si weyn loo rumaysan yahay in doorasho software waa waddada saxda ah si ay u qaataan sababtoo ah waa ad amaan ah si fudud updated, halkaas oo sida hardware waxaa inta badan uu waqtigiisu dhamaaday ee ay markii ugu waa la heli karo in lagu iibsado. Waxaa intaa sii dheer, milkiilaha telefoonka marnaba arki doontaa software statistics iyo la socodka, halka goosin ka mid ah qalabka lagu ogaanayo sidaa darteed haddii aad rabto in aad sii socoshada aad hoos wajigii, iyadoo la isticmaalayo software sida exactspy-Best Free Cell Phone Spy App waa fursada ugu wanaagsan.
Bal aynu eegno sababta aad u baahan tahay waxaa laga yaabaa inay isticmaalaan statistics iyo la socodka software in meesha ugu horeysa ee:
Kormeerka Shaqaalaha Your - Ku xiridda exactspy-Best Free Cell Phone Spy App shirkaddaada bixisay telefoonada kuu ogolaanayaa inaad kopmbutarka ka mid ah shaqaalaha. Tani waxay u ogolaaneysaa in aad haysato xadgudub by hab wicitaanada shakhsi under control iyo sidoo kale hubiyaan in shaqaalaha aan daaha ka war qarsoodi ah oo ku saabsan telefoonada ay.
Backing Up Your Phone Own - In this maalin iyo da'da, waxaan kaydin wax badan oo ku saabsan tilifoonnada gacanta. Laga soo bilaabo faylasha xiriirada iyo file in isgaarsiinta email muhiim ah, aan lagu lumin lahaa haddii ay u bartey lumay. Si kastaba ha ahaatee, by fulinayo exactspy-Best Free Cell Phone Spy App telefoonka adiga kuu gaar ah aad ka abuuri karaan rikoorka toos ah ee hawlahaaga.
Hayso Track ee Kids - caruurta Our waxa ay noqonayaan iyo aad u badan internet bixio, laakiin waxaa laga yaabaa in ay haysan qaangaarka ah in la aqoonsado iyo xaalad halis ah ka qaban. exactspy-Best Free Cell Phone Spy App laguu ogolaado in aad si ma aha oo kaliya arkaan waxa ilmahaagu sameynayo, laakiin sidoo kale ku siin karaa GPS statistics si ay ula socdaan ay meesha.
Cell phone software Basaas oo lacag la'aan ah
• wicitaanada Monitor • fariimaha qoraalka Track
• Read emails • Location Track GPS
• Kormeer Isticmaalka Internet • Helitaanka Calendar iyo Cinwaanka Book
Waxaad Download karaa: Aad jeclaan lahayd Best Free Cell Phone Spy App ?
Best telefoonka gacanta tracker, Best Free Cell Phone Spy App, Cell phone software Basaas oo lacag la'aan ah, Software basaas iphone Free, Barnaamijyadooda Free basaas mobile ee Android, Software Free basaas mobile ee Android